MINISTERAN’NY FIFANDRAISANA SY SERASERA - Fihavaozana Karismatika katôlika fiombonana
Home »MINISTERAN’NY FIFANDRAISANA SY SERASERA
MINISTERAN’NY FIFANDRAISANA SY SERASERA
Andriamanitra dia Tokana olona telo : Ray – Zanaka – Fanahy Masina. Ao amin’ny Jenezy 1, 26a : “Andeha isika hanao olona mitovy endrika amintsika”. Na dia tsy mbola nazava loatra aza ao amin’ny Testamenta taloha, dia hita mazava tsara eto fa misy olona maromaro ao amin’Andriamanitra. Mifandray ireo olona ireo, indrindra raha hamorona ny olombelona Andriamanitra.
Ao amin’ny Matio 5, 1, dia milaza ny mpanoratra fa niakatra an-tendrombohitra i Jesoa mba hitory ny hasambarana valo. Tamin’ny andron’i Jesoa dia tsy nisy ny fanamafisam-peo. Nefa tamin’izany i Jesoa dia nampiasa ny fahaizany mampita. Ny fiakarany teo ambony havoana dia mba ho fantatry ny olona aloha hoe iza izany miteny izany. Mila mifankahita ny olona mifandray noho izany. ny faharoa dia mba ho haino tsara ny feony, mba ho tafita ny hafatra tiany hampitaina. Hitantsika amin’izany fa nampiasa ny fomba rehetra i Jesoa mba hampitana ny hafatra.
Hatramin’ny fahariana izao tontolo izao ka hatramin’izao fotoana iainantsika izao, dia tsy azo atao ambanin-javatra ny fifandraisana. Tsy afaka ny tsy hifandray isika, izany no antony hanaovana izay fomba rehetra mba hampitana ny hafatra.
Amin’izao androntsika izao, dia lazaintsika fa olona bado izay tsy mampiasa ny fitaovam-pifandraisana : boky, gazety, radio, fahita lavitra, finday, aterineto sns. Amin’ny maha mpikambana betsaka antsika ary koa amin’ny maha-olona antsika, dia ilaintsika ary ampiasaintsika karismatika ireny fitaovana sy fomba ireny mba hampitana vaovao sy hitoriana ny vaovao Mahafaly. Izay no antom-pisian’ny ministeran’ny fifandraisana sy serasera.
Eo anivon’ny Fihavaozana Karismatika Katolika FIOMBONANA, dia manana adidy lehibe ny ministeran’ny fifandraisana sy serasera hampita ny vaovao momba ny fikambanana manerana ny tany, eo anivon’ny firenena, eo anivon’ny Diosezy tsirairay avy ary eo anivon’ny gropy. Noho izany, dia adidin’ny ministeran’ny fifandraisana sy serasera eo anivon’ny gropy no mampita amin’ny diosezy, ny diosezy mampita amin’ny nasionaly ary toy izany hatrany. Anjaran’ny ministeran’ny fifandraisana sy serasera noho izany no manaparitaka ny vaovao, ny gazety eo anivon’ny diosezy sy ny gropy.
Ry rahalahy sy anabavy isany, isan’ny fitorianao ny vaovao Mahafaly ny fandraisanao andraikitra amin’ny serasera. Koa manasa anao mba hiditra amin’izany, ary koa handray andraikitra feno mba ho fanitarana ny fanjakan’Andriamanitra, ka hipaka amin’ny fon’ny olona tsirairay avy ny Evanjely.